Muqdisho: Ciidamada Soomaaliya Oo Weerar Ku Qaaday Al-shabaab. - Horn Cable TV
0	Maarso 12, 2018 9:50 am
Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho Gaar ahaan Xaafadaha Degmada Kaxda ayaa sheegay in halkaasi uu xalay ka dhacay iska hoor imaad u dhexeeya Ciidanka dowladda iyo dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-shabaab.
Taliyaha Nabad Sugidda degmada Kaxda iyo Ciidan uu Hogaaminayo ayaa Waxa la sheegay in ay weerar ku qaadeen Qabuuraha degmada Kaxda ee loo yaqaano Boqolka Boos, halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalyahano ka tirsan ururka Al-shabaab ah.
Qaar kamida dadka Degmadaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu socday muddo kooban islamarkaana ay jiraan dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dagaalka.
ilaayo hada inta la ogyahay 1 Askari oo ka tirsan Ciidamada Soomaaliya ayaa la sheegay in uu dagaalkaasi ku dhintay.
Masuuliyiinta Degmada Kaxda Iyo laamaha amaanka ayaan ka hadlin dagaalkaasi habeenkii xalay ahaa dhex maray Ciidamada Dawladda Iyo dagaalyahada ururka Al-shabaab ee ka dagaalama koonfurta iyo Badhtamaha Dalka Soomaaliya.
Khasaaraha Ka Dhashay Diyaarad Laga Leeyahay Turkiga oo Ku Dhacaday Iiraan.